IIKHABHATHI ZERUSTIC ZASEKHITSHINI (ISIKHOKELO SOYILO LOKUGQIBELA) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Iikhabhathi zerustic zasekhitshini (Isikhokelo soYilo lokugqibela)
Iikhabhathi zerustic zasekhitshini (Isikhokelo soYilo lokugqibela)
Wamkelekile kwigalari yethu eneekhabhathi zekhitshi zerustic kubandakanya ogqityiweyo, izitayile zomnyango, izixhobo zekhompyutha, izimvo ezifanayo ngombala kunye nokunye.
Irugged, timeworn and warm - ngala amanye amagama esihlala siwadibanisa nesitayile sasekhitshini. Eyaziwa kakhulu ngokuba ngumhlaba we-aesthetics kwaye ihlala ngokubukeka, isitayela sekhitshi se-rustic siphumelela kungekuphela komlingiswa kodwa sithathwa njengenye yezona ndlela zifudumeleyo, zikhululekile kwaye ziyamema kwindawo yoyilo lwekhitshi. Umtsalane wayo wakudala kunye nesimbo esifudumeleyo nesikhululekileyo zonke zinegalelo ekubambeniimeko yasemhlabeni yendlela yokuphila yokwenene yasemaphandleni.
Inkqubo ye- Uyilo lwekhitshi ye-rustic ikwayindalo ngokwendalo kodwa ithatha inkuthazo eyahlukileyo evela kwimimandla ethile, nganye ivelisa isimbo esahlukileyo kunye nokutyikitywa okujongeka njengeLodge kunye nesimbo seNtaba, intlango kunye nesitayile seadobe, isimbo sefama nelizwe kunye nesimbo saseNtshona-ntshona kunye nesimbo saseOld West.Amakhitshi aseRustic ahlala enendawo yaseMelika: Umzantsi-ntshona, iNtaba yeNtshona okanye iPacific Northwest okanye iAdirondack, kodwa sihlala siyibona le ndlela kwizindlu zeelogo nakwiikhabhathi.
Uhlobo lwekhitshi lwe-rustic lukwaziwa nangokwemvelo kwekhabethe lekhabhathi lekhitshi elenza isibheno esisezantsi, esisekhaya kunye nentuthuzelo. Uhlobo lwekhabhathi yekhitshi ye-rustic nayo ayifani kwaphela nesitayile selizwe njengoko zombini zikhupha ubushushu, intuthuzelo kunye noxinzelelo lwendalo. Zombini ezi zitayile zikwacacisa ubuhle obungaphelelwa lixesha, nangona kunjalo, xa kufikwa kubuhle, isitayile sekhabhathi yekhitshi ye-rustic ayichazwanga ngakumbi.
Izixhobo zeRustic zeKhabinethi yeKhitshi
Iikhabhathi eziMhlophe zeRustic
Iikhabhathi zeKhitshi yaseRustic
Iikhabhathi zasekhitshini zeRustic Hickory
Iikhabhathi zeKhitshi zaseRustic Alder
Iikhabhathi zasekhitshini zaseRustic
Rustic Pine Ikhitshi laseKhitshini
Iikhabhathi zekhitshi ze-DIY Rustic
Uyenza njani iikhabhathi jonga iRustic
Iminyango yeKhabhinethi yaseRustic
Imibala yepeyinti yeeKhabhathi zeRustic zaseKhitshini
Iingcamango zeKhabhinethi zeRustic
Apha ngezantsi siphonononga ezinye zeempawu eziphambili zoyilo lwekhabhathi zekhitshi zokukunceda uthathe isigqibo sokuba ngaba isitayile sabo esirhabaxa kunye nobuhle obudala bezinto ezifanelekileyo kwindlu yakho. (Ukufumana ezinye izimvo ndwendwela igalari yethu ebonisa ukuthandwa Izitayile zekhabhinethi yasekhitshini )
Iimpawu zeekhabhathi zekhitshi zerustic
Iikhabhathi zekhitshi zaseRustic zaziwa kakhulu ngobuhle bazo oburhabaxa, ukubonakala kwendalo kunye nokomelela komntu. Ngokubanzi, babonakaliswa ngokudibanisa isitayile selizwe kunye nomtsalane omdala. Ibekelwe bucala ngaphandle kolunye uhlobo lwekhabhathi yasekhitshini ngenxa yokujongwa kwayo okungacaciswanga ngakumbi nangaphandle.
Nazi ezinye izinto ezithandwayo zoyilo lwekhabhathi yekhitshi:
I-aesthetics erhabaxa -Ukuba igama elinye linokushwankathela zonke iimpawu ngokubanzi zeekhabhathi zekhitshi, le iya kuba yeyona ndlela ilungileyo yokuchaza. Iikhabhathi zekhitshi zaseRustic zinobuhle oburhabaxa, obu-rugged, kodwa zisabukeka kakhulu. Yinto eyahlukileyo yesitayile sekhabhinethi sekhitshi sanamhlanje esine-sleek kwaye ipolishiwe, kwaye ifana ngokusondeleyo nobushushu kunye nentuthuzelo yelizwe iikhabhathi zasekhitshini, kodwa ijongeka ingachazwanga.
Inkangeleko yendalo kunye nobuhle - Iikhabhathi zekhitshi zaseRustic zinenkangeleko yendalo kunye nobuhle. Ukongeza, iikhabhathi zekhitshi ze-rustic zithatha ukhuthazo olukhulu kwindalo kwaye oku kuhlala kubonakaliswa kukusetyenziswa kwezinto zendalo ekugqityweni kwazo kokwenyani.
Ukusetyenziswa kakhulu kweenkuni kunye neenkuni ezinamaqhina- Njengoko sele kukhankanyiwe, eyona nto ibalulekileyo ekhitshini ye-rustic ziikhabhathi zazo ezintle. Iikhabhathi zekhitshi zeRustic zisebenzisa kakhulu izinto zendalo ezinje ngomthi onzima oqinileyo kunye neepateni zokugaya ezibalaseleyo, zihlala zigqibile. Isitayile sekhabhathi yekhitshi eyaziwayo saziwa kakhulu ngokusetyenziswa kweenkuni ezinamaqhina.
Ubume oburhabaxa ngokusetyenziswa kwepeyinti ebunayo kunye namabala - Ukuhlala unyanisekile kwisibheno sayo se-rustic kunye ne-aesthetics enqabileyo, iikhabhathi zekhitshi ze-rustic ziphathwa ngokugqitywa kwebala lokugqitywa kokupenda okuphelileyo, nangona eyokuqala ixhaphake kakhulu kuneyokugqibela. Ukongeza, isitayile sekhabhathi yekhitshi ye-rustic ikwasebenzisa kakhulu ukuthungwa ngokuxubana nekhabhathi yomthi kunye ne-backsplashes yamatye endalo, izixhobo zentsimbi ye-antique, njl.
Imibala eshushu - Imibala yeekhabhathi zekhitshi ye-rustic zihlala zifudumele kwaye zinemibala etyebileyo emdaka, ihlala ihambelana nemibala yomhlaba efana nobomvu obunzulu, imifuno kunye nephuzi.
Ekrwada kunye ne-weather - Njengalo naluphi na uhlobo lwesiko lekhabhathi yasekhitshini, iikhabhathi zekhitshi ze-rustic zibonisa ukubonakala okuluhlaza, ukubonakala okuxakekileyo kunye nokuhlala kwisibheno sexesha elifanelekileyo. Oku kukwabonakaliswa kuyilo lwekhabhathi yekhitshi ngokusetyenziswa kweenkuni ezinokungafezeki kwendalo okunje ngeeblls, amaqhina, iipiks zeentaka, imingxunya yeentshulube kunye nemingxunya. Ukukhubazeka ngakumbi kweenkuni, kokukhona kubonakala kukrwada kwikhabhathi yekhitshi ye-rustic.
izipho zobhedu kwisikhumbuzo seminyaka eli-19
Imithi eqingqiweyo - Imithi eqingqiweyo ikwayinto eqhelekileyo kwiikhabhathi zekhitshi. Iikhabhathi zekhitshi zaseRustic azihonjiswanga kakhulu kodwa zibeka ugxininiso ekubekweni kwempahla kunye nendlela elungileyo yokufezekisa ngoku kukucoca iingcango zekhabinethi yekhitshi eneenkcukacha ezincinci zokuhombisa. Ungabona ngakumbi kolu hlobo lwesitayile kuthi Iikhabhathi zekhitshi lezandla iphepha.
Ikhabhathi eyomeleleyo kunye nokwakha okuqinileyo- Iikhabhathi zekhitshi zeRustic azaziwa nje kuphela ngobuhle bazo obuhle kodwa nangokwakha kwazo okuqinileyo kunye nokuqinileyo. Ngenjongo yoqobo yokugcina ubomi, iikhabhathi zekhitshi zerustic zazakhiwe ngokwesiko ngobuchule obuphezulu bokwakha kusetyenziswa iinkuni ezilukhuni ezomeleleyo.
Iyasebenza - Uhlobo lwekhabhathi yekhitshi lwerustic lwenziwa ukuba lusetyenziswe kwaye lungathandwa njengekhitshi yokubonisa, ngenxa yoko ikhabinethi yakhiwe ngokusebenza ngokupheleleyo. Ukunxiba kwendalo kunye neenyembezi eziziswa kukusetyenziswa kwemihla ngemihla zikwanika iikhabhathi zekhitshi ezirhabaxa ixesha labo kwaye bahlala kwisibheno.
Ugqiba iikhabhathi zekhitshi ze-rustic
Iikhabhathi zekhitshi zeRustic kufuneka zijongeka ngokungathi zinikezelwe ngokuhamba kwexesha. Ukufumana ukubonakala kwangexesha elifanelekileyo, iikhabhathi zekhitshi ezi-rustic zihlala zixinezelekile okanye zinikwe indawo enobuso. Ukugqitywa okuqhelekileyo kwiikhabhathi zasekhitshini ze-rustic kukwabandakanya ukugqitywa okumhlophe, ukugqitywa kwendalo, ukugqitywa koxinzelelo, ukugqitywa kwezinto zakudala kunye nokugqitywa kwebala.
Nalu ushwankathelo lweendlela ezisetyenziswa rhoqo zokugqiba iikhabhathi zekhitshi ze-rustic:
Gcina ibala -Ukugcoba yindlela ethandwayo yokugqiba esetyenziselwa ukuqaqambisa amanqaku endalo ekhabhathi ekhitshini. Ngokwenkcazo, amabala eenkuni adityaniswa ngombala omiswe ngotywala okanye i-gent yokugqibezela njenge-shellac, i-lacquer, i-varnish okanye i-polyurethane
Amabala eenkuni asetyenziselwa ukuphucula umbala wendalo kunye neepateni zokucoca iinkuni zokwenene. Amabala aqhele ukufunxwa ziipore, amaqhina kunye neenkozo zomthi, zibashiya ngombala omnyama kunye nembonakalo ebalasele ngakumbi. Obu buchule bokugqibezela bunika iikhabhathi zekhitshi zerustic ukubukeka okuqinileyo okwenziwe ngesandla, ngelixa ivumela ubuhle bendalo bezinto zekhabhinethi ukuba zibalasele. Khetha oku kugqiba ukuba ufuna ukwenza iinkuni njengeyona nto iphambili kwikhitshi yakho yesitayile.
Injengokubengezela - Injengokubengezela isetyenziswa kakhulu kuseto lwekhitshi ngokwesiko, ngakumbi ilizwe kwikhabhathi yekhitshi kuba banikezela ngombono we-antique kunye nelizwe elidala. Ngokwenkcazo, i-glazing luhlobo lokugqiba olwenza ukuba kusetyenziswe i-glaze okanye ulwelo olucacileyo okanye olungenamitha olusetyenzisiweyo njengengubo ephezulu yeekhabhathi okanye zefanitshala ezipeyintiweyo okanye ezinamabala. Injongo ephambili ye-glazing kukudibanisa umbala kunye nokubonelela ngokuqaqamba kwikhabhathi yekhitshi.
Injengokubengezela isetyenziswa kakuhle kwiikhabhathi zasekhitshini ezinerust ezineenkcukacha ezinjengokubumba okanye imifanekiso. Ishiya isiphumo sezithunzi kwiinkcukacha ezibaziweyo ngelixa kugqitywa iikona, imiphetho kunye nokujikeleza kwekhabhinethi.
IiGlazes ziyafumaneka kwimibala eyahlukeneyo enje ngobhedu, i-mocha, ikofu, emhlophe, ukhilimu, ukubala ezimbalwa. Kukho iindidi ezimbini eziqhelekileyo zokugqitywa kwe-glaze ezisetyenziselwa iikhabhathi zekhitshi ze-rustic ezibizwa ngokuba yi-glaze emnyama kunye ne-glaze emhlophe. Umdibaniso odumileyo kukusebenzisa i-glaze emhlophe ngaphezulu kweekhabhathi ezimhlophe zerustic.
Ngelixa i-glaze emnyama isetyenziswa ngaphezulu kweekhabhathi zekhitshi ezinamabala. I-glaze emnyama inokusetyenziswa ngaphezulu kweekhabhathi ezimhlophe zekhitshi ukuvelisa umahluko kunye nefuthe lokuqaqambisa ngakumbi. Nangona kunjalo ukuba ujongo lwakudala lufunwa, yomibini imibala inokudityaniswa. Ndwendwela eli phepha ngaphezulu izimvo zasekhitshini zomthi omnyama .
Ukugqitywa kwe-Weather -Indlela elungileyo yokunika iikhabhathi zekhitshi zerustic ukubonakala okugugileyo, imbonakalo yakudala okanye isibheno sexesha elifanelekileyo kukuhamba kwemozulu. Isimo sezulu luhlobo lwendlela yokugqiba ubuxoki esetyenziselwa ukuvelisa ikhabethe okanye umthi obonakala ngathi ubonakalisiwe kwiminyaka yokutshintsha izinto zangaphandle ezifana nemvula, ilanga kunye nomoya. Iikhabhathi zekhitshi zaseRustic zihlala zinolu jongo luthambileyo olufana nocingo oludala, iiplanga zesisele esineziqholo, iinkuni ezikhutshiweyo, iinkuni ezenziwe lilanga, ixesha lokusebenzela iiplanga okanye iinkuni ezitshisiweyo.
Le nkqubo ikhethekileyo yokugqibezela ikwabhenca ipateni yendalo yegraining, amaqhina kunye nokujijisana kwekhabhathi yomthi kwindawo eyodwa. Ukugqitywa kwe-weather kufezekiswa ngokuxinzelela iinkuni ngesandla ukwenza ukunxiba okungafunekiyo, iinyembezi kunye nobudala. Ibala liyasetyenziswa ngaphezulu kweenkuni, lize lilandelwe yingubo ephezulu yokuqaqambisa glaze ukuqaqambisa iinkozo zomthi eziphakanyisiweyo. Umphezulu wenziwe ngesanti, wanyanzelwa ngobunono ujikeleze imiphetho ephakanyisiweyo kunye namaqhina de ibala elingaphantsi kwe-glaze livezwe.
Ukugqitywa kokugcwala kuxabisekile ngenxa yobuhle bayo obudala kunye nexesha elifanelekileyo. Ukubonakala kwayo ngamanye amaxesha kunokubandakanya iithoni zangaphantsi ezingwevu ezilinganisa iinkuni ezindala.
Ukugqitywa koxinzelelo - Iikhabhathi zekhitshi zaseRustic ezinesiphelo esibuhlungu esilinganisa ubuhle befanitshala eyinyani ye-antique kunye nekhabhathi.Ukucinezeleka yenye indlela ethandwayo yokugqibezela esetyenziselwa ukunika iinkuni kunye nekhabhathi yekhabinethi ukubonakala kwembasa kunye nexesha elidala. Oku kuxhaphake kakhulu kusetyenziswa kuyilo lwekhabhathi yekhitshi kunye nelizwe eliphefumlelweyo kuseto lwekhitshi. Ukubandezeleka, okwaziwa ngokuba yi-antiquing, luhlobo lweendlela zokugqiba i-faux ezibandakanya ukudala iziphene ezingezizo ebusweni bekhabhathi zekhitshi emva koko ziyiphatha ngengubo ye-antique glaze. Inkqubo yokugqibezela kulula ukuyisebenzisa usebenzisa izinto ezilula kwaye yenziwa njenge projekthi.
Ukugqitywa kwe-antique okanye uxinzelelo kubandakanya isanti ephindaphindayo ukufumana ubume obuphelelweyo ngokubanzi. Inkqubo iqalisa ukuqala ngeekhabhathi ezigutyungelwe ngumaleko wokuqala kwaye emva koko isandwe ukuyinika iziphene ezingezizo ezokwenziwa. Emva koko igutywe ngepeyinti kwaye iphindaphindwe ngesanti ukuyinika ubume ngakumbi. Njengonyango lokugqibela, iikhabhathi zomthi zigqitywe nge-antiquing glaze zisebenzisa ilaphu elithambileyo okanye idlavu. Imiphetho emva koko yenziwe mnyama nge-antiquing glaze ukuyinika ugxininiso.
Inkqubo ye- Ukugqiba iikhabhathi yahlukile esiphelweni esidityanisiweyo ngendlela yokuba isiphelo soxinzelelo sisetyenziswa ngepeyinti, ngelixa lokugqibela lisetyenziswa ngamabala emithi. Ukubandezeleka kukwaxhaphake kakhulu kwiikhabhathi ezimhlophe ezimhlophe zekhitshi.
UPatina kunye noHeirloom bagqiba -Ukugqibela kukaPatina kunye nelindlalifa lolunye uhlobo lokugqitywa kweediliya okunika iikhabhathi zekhitshi ye-rustic ukubonakala kwe-antique kunye nexesha lokuzalwa. Ezi zinto zigqityiweyo zisebenzisa iinkcukacha ezenziwe ngesandla kunye nobugcisa bokuvelisa iikhabhathi zekhitshi ezilungele useto lwasekhitshini lwesiqhelo, ezinje ngesimbo sasekhitshini se-rustic.
Ukugqitywa kwendlalifa kuyafana nokugqitywa koxinzelelo. Yenza imbonakalo yakudala isebenzisa amabala, ukugcoba kunye noxinzelelo. Phambi kokuba kufakwe izinto zokugqiba, iikhabhathi zekhitshi ezenziwe ngomthi ziphantsi kwendlela yokuxinzelela ngokufaka isanti, ukugoba amazinyo kunye nokulungisa imiphetho kunye neekona kunika iikhabhathi zomthi ukungafezeki kunye nomphezulu wexesha elomeleleyo. I-Glaze isetyenziselwa ukugxininisa iinkcukacha zomnyango kunye nokunika imiphetho kunye neekona umphumo wesithunzi. Ukuba inkangeleko yokuhomba nokuguga iyafuneka, ukungafezeki ngakumbi kunokongezwa ngokumane ukuphinda amanyathelo.
Njengokugqitywa kwendlalifa, ukugqitywa kwepatina kukwayindibaniselwano yeendlela ezahlukeneyo ezibandakanya, ngaphezulu kwesanti, uxinzelelo kunye nokugaya. Iikhabhathi zekhitshi ezenziwe ngomthi nazo zixinzelelekile kukusebenzisa isisele ukuze zivelise iimpawu zokulinganisa ezibonisa ukuvela kweentaka ziqhekeza imingxunya, imingxunya kunye nemingxunya. Inyathelo lokugqibela libandakanya ukubrasha owomileyo kunye nokusetyenziswa kwengubo yokugungqa kukugxininisa iinkcukacha zomnyango wekhabhathi wekhitshi. Isiphumo kukubonakala okudala kugqityiwe kwaye kujongeka kuyinyani.
Ngokubanzi, iikhabhathi zekhitshi zerustic zinokubonakala kwangexesha kunye nobuhle obungachazwanga. Xa kuziwa kuyilo, iprofayili yehardware yasekhitshini yekhitshi ichazwe kakuhle kwaye ilula, ngelixa ubungakanani buqhelekile ukuba bube chunky. Izibambo zihlala zixande kwifom kodwa ngamanye amaxesha zibandakanya ii-accents ezilula ezinje ngeemilo zejiyometri okanye iipleyiti zangasemva zokuhombisa ezinokusikwa kwesikwere.
Imigqomo yendebe kunye notsalo nazo zisetyenziswa ngokuxhaphakileyo kwisitayile sekhabhathi yasekhitshini. Imigqomo yeNdebe kunye notsalo ziisetyhula ezinesiqingatha okanye iziqingatha zenyanga ezitsaliwe ezinyuswe ngecala elivulekileyo elijonge ezantsi. Olu hlobo lwekhabhathi yekhitshi lekhitshi lufana nezona ndidi zininzi zesitayile sekhitshi lasekhitshini ngenxa yoyilo lwakudala kunye nobuhle beediliya.
Iikhonkco ziluhlobo oludumileyo lwekhabhathi yekhitshi yezixhobo zekhitshi. Imilo yamaqhina kolu hlobo lwekhabhathi yekhitshi zihlala zijikeleze okanye isikwere esimilo ngaphandle kweenkcukacha. Ngamanye amaxesha, izixhobo zekhabhathi zekhitshi ye-rustic inokubandakanya imijikelezo encinci okanye imida ejikeleze iprofayili yamaqhina.
Ukubonakala kwesilumko, i-rustic yekhabinethi yehardware enesimo esomeleleyo kakhulu. Endaweni yokuxubana nezinto zekhabinethi ekhitshini, zihlala zimile kwaye zizisa into eyahlukileyo. Imibala ihlala imnyama, ngombala omnyama ngowona mbala uthandwa kakhulu.
Xa kuziwa kwimathiriyeli kwaye kugqityiwe, olona hlobo lubalaseleyo lokutsala, amaqhina kunye neminyango yekhabinethi esebenza kakuhle ngesitayile sekhabhathi yekhitshi ye-rustic zezo zeentsapho zentsimbi ye-antique. Olunye ugcino lwekhabhathi yekhitshi eyaziwayo ekhitshini yeekhitshi zerustic zezi:
Mnyama -Mnyama ngumbala odumileyo wehardware yekhitshi yekhitshi. Ikhabhathi emnyama yekhabhathi yentsimbi iyathandwa ngenxa yesimo sayo esomeleleyo kunye nokungafani okucacileyo okuzisa kwikhabhathi yekhitshi yomthi. Izixhobo zekhabhathi ezimnyama zasekhitshini nazo zinemvakalelo yokuvuna kunye neyakudala, ukuyenza ukuba ibe ngumdlalo ogqibeleleyo nembonakalo yakudala yeekhabhathi zekhitshi.
Jonga le ndebe imnyama emnyama itsala - Indlela
Ubhedu lweAntique - Ubhedu lweAntique lunembonakalo eyomeleleyo yobudala yobhedu obumnyama. Ubonakala ngombala omdaka ophakathi kunye negolide engaphantsi. Ubhedu lweAntique luyaziwa ngokuba yenye yezona ntlobo zomeleleyo zekhabhathi yentsimbi njengoko yenziwe ngezinto ezinamandla ezifana nekristale ekhokelayo kunye nepewter
Jonga le knob yobhedu yakudala kwi - Indlela
Intsimbi yakudala - Intsimbi ye-antique ibonakaliswa ngombala omdaka ongwevu ngamalahle angaphantsi. Ukubonakala kwe-antique yentsimbi yokugqiba izixhobo zekhabinethi kunokungafezeki okunika inkangeleko enomdla kunye nesibheno sexesha elifanelekileyo esenza umdlalo ogqibeleleyo wekhabhathi zekhitshi. Umbala wayo obonakalayo kunye nembonakalo ivelisa iziphumo ezahlukeneyo ngokuxhomekeke kwimeko yokukhanya. Ukongeza kubuhle bayo obukhethekileyo, i-antique yentsimbi nayo yomelele kakhulu.
Ibronze yaseVenice - Ihardware yekhitshi yaseVenetian yekhitshi yehardware ibonakaliswa ngombala omnyama kakhulu osondeleyo kumnyama, kodwa unee-accents zangaphantsi zangaphantsi ezimdaka. Ihardware yekhitshi yaseVenetian yekhitshi yentsimbi idibanisa kakuhle kunye nobuhle bendalo bekhabhathi yekhitshi yomthi oqinileyo kwaye isebenza kakuhle ngemithi ekhanyayo nemnyama. Ngokubanzi, iVenetian bronze ikhitshi lekhabhathi yentsimbi yongeza i-rustic vibe yokufudumeza iikhabhathi zekhitshi zomthi eziqinileyo.
Jonga lo mnyango wekhabhinethi yobhedu wakudala utsala- Indlela
Ezinye izinto ezithandwayo zekhabethe yekhitshi ezigqityiweyo ezinokuthi zisetyenziselwe iarustic yekhabinethi yezixhobo zekhompyutha zizinto ezindala zokugqiba kunye neoyile yokurhafisa ubhedu.
Umgangatho ophezulu wokhuni oluqinileyo kwimibala efudumeleyo okanye ukugqitywa kwendalo kuhlala kuyenye yeempawu zokutyikitya kwesitayile sekhabhathi yekhitshi. Nangona kunjalo, enye indlela yobutyebi bemithi efudumeleyo ziikhabhathi ezimhlophe zekhitshi.
Endaweni yokupeyintwa kugqitywe ngokucacileyo, iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini zihlala ziphathwa ngeendlela ezahlukeneyo zokugqiba ezinje ngoxinzelelo, imozulu okanye ukuqaqambisa ukubanika inkangeleko engacaciswanga kunye nokubonakala kwangexesha. Obu buchule bokugqibezela bunika umdla ngakumbi kwikhabhathi yekhitshi ye-rustic kwaye unikezela ngamalaphu ezinto ezibonakalayo kwinkangeleko yendawo.
Esikhundleni se-crisp, imibala emhlophe eqaqambileyo, isitayile sekhabhathi yekhitshi sijolise ekufudumaleni kunye neetoni ze-creamier ezinje nge-beige, emhlophe emhlophe, ukhilimu kunye ne-antique emhlophe. Ezi shades ezimhlophe zihlala zinxulunyaniswa nesiko okanye Iifama zasekhitshini zasendlwini .
Iikhabhathi zekhitshi ezimhlophe zaseRustic zihlala zinemiphetho emnyama okanye iikona eziqaqambileyo kunye nemiphetho. Oku kuqhele ukwenziwa ngokusebenzisa ukutyabeka okukhazimliswe ngaphezulu kwekhabhathi enamabala okanye epeyintiweyo, kushiya isiphumo somthunzi kwiikhabhathi.
Iikhabhathi ezimhlophe zerustic zezona ndlela zilungileyo zokuthambisa ukubonakala kweekhabhathi zekhitshi. Kubanini bamakhaya abafumana iikhabhathi zasekhitshini zendalo ezigqityiweyo zinzima kakhulu emehlweni, le yeyona nto ilungileyo enokuqwalaselwa.
Iikhabhathi zekhitshi ezimhlophe zaseRustic kulula ukusebenza nazo ngokubhekisele ekuxubeni nasekufaneni izinto zokuhombisa kunye nezinye izinto ezigqityiweyo kwisithuba esifana nomgangatho, umbala wodonga, izinto zokubuyela umva kunye nekhawuntari. Ukongeza, iikhabhathi zekhitshi ezimhlophe zerustic zisebenza ngcono kwizithuba ezincinci zekhitshi njengoko zisenza ingcinga yendawo enkulu.
Izinto ezisetyenziselwa iikhabhathi zasekhitshini zaseRustic
Ngokwesiko, eyona nto iphambili esetyenziselwa iikhabhathi zasekhitshini ze-rustic yimithi eqinileyo. Kodwa zininzi iintlobo zeenkuni kwimarike kwaye kukho iindlela ezahlukeneyo ezenza olona khetho lufanelekileyo kwiikhabhathi zasekhitshini ngenxa yokuba zibukeka zirhabaxa kwaye zirustic. Ezinye zeentlobo zeenkuni ezifanelekileyo kwisitayile sekhabhathi sekhitshini yipayini, i-hickory, i-alder, umsedare, i-oki, i-cherry kunye nemephu. Ngokubanzi, uninzi lwale mithi lubonakaliswa ngombala oshushu wendalo kunye nokubonakala kwe-grainy kunye neqhina.
Isishwankathelo, ipineyini lukhetho oluphezulu lwekhabhathi zekhitshi kuba ibonisa amaqhina abonakalayo-ukujonga okufana nolu hlobo. Ipayini ikwasetyenziswa ngokubanzi ngenxa yokubonelela ngobuninzi kunye nexabiso elifanelekileyo.
I-Cherry, i-oki, i-maple, i-alder, imisedare kunye ne-hickory nazo zikhethwa ngokukhethekileyo kwiikhabhinethi zasekhitshini. Ngokwamaxabiso, i-cherry yeyokukhetha okuphezulu ngenxa yomgangatho wayo omangalisayo, awuqhekezi kwaye ujije ngokulula kwaye unombala weplanga ocebileyo wendalo. Nangona kunjalo, abanye abaninimzi basenokufumana i-knotty pine ikhangeleke ngakumbi ngenxa yendlela eyahlukileyo.
I-Maple kunye ne-hickory nazo ziyimithi eqinile kwaye zibiza ngaphantsi xa kuthelekiswa neenkuni ze-cherry. I-Oak, kwelinye icala, yenye yezinto ezithandwayo zekhabinethi ekhitshini ehlala inxulunyaniswa neendlela ezininzi zesiko. Iyaziwa ngokudibanisa ubuhle obumangalisayo, ukomelela, ukubakho kunye nexabiso elifanelekileyo. Inombala wegolide wendalo kunye neepateni zokutya okuziinkozo, ezinokuthi ezinye zifumane ukhetho oluncinci lwekhabhathi yekhitshi ye-rustic, ngakumbi kwabo bafuna ubuhle obuhle ngakumbi.
Imithi efunyenweyo ikwayenye into ethandwayo yeekhabhathi zekhitshi ze-rustic njengoko ngokwendalo zijongana nembonakalo enezinto ezivavanywa lixesha. Izinto ezihlangulwe koovimba, oovimba kunye nezindlu ezindala okanye amaplanga ahlaziyiweyo zinokusetyenziswa ngokufanelekileyo njengee-aksenti, iitrayi kunye nobuso beminyango yekhabinethi yesitayile sekhabhathi yekhitshi.
Apha ngezantsi siphonononga iindidi ezine eziphambili zeenkuni ezisetyenziselwa iikhabhathi zekhitshi zerustic, kunye nesishwankathelo seempawu zazo ezilungileyo nezingalunganga njengezinto zokwakha ikhabhinethi.
I-Hickory luhlobo lomthi waseNyakatho Melika wenza usapho lwe-walnut. Ngaphandle kokuthwala amandongomane atyiwayo, i-hickory ivelisa amaplanga aqhele ukusetyenziselwa ukwakha okanye ukwakha ifanitshala kunye nokusetyenziswa kwangaphakathi nangaphandle. Olu lukhetho oludumileyo lweekhitshi eziphefumlelweyo ze-rustic kwaye zihlala zisetyenziselwa isiko kunye nekhabhathi yekhitshi yesiqhelo.
Ngokwembonakalo, i-hickory luhlobo lomthi olunombala ococekileyo wendalo, umbala otyheli. Inepateni efanayo yokugcoba kwi-oki, kodwa umbala wayo ukhaphukhaphu njenge-oki igolide ngakumbi. Olunye uphawu olubalulekileyo lwe-hickory kukuba inembonakalo eyahlukileyo ngokwendalo. Umbala omangalisayo we-hickory uziswa yimibala eyahlukeneyo ye-heartwood kunye ne-sapwood enokuthi iqale ukusuka kumbala omhlophe omhlophe okanye omhlophe, ukuya kumbala otyheli ukuya kobomvu nomdaka mnyama.
Iikhabhathi zasekhitshini zeRustic hickory ngokubanzi zibonakaliswa ngokuba mhle ngombala. Iikhabhathi zasekhitshini zeRustic hickory zinokwahluka okuziinkozo okunzulu ngakumbi kunye nombala ogqwesileyo. Iikhabhathi zasekhitshini zeHickory zibonisa iphatheni egudileyo, ebalaseleyo egreyini kunye neenkozo ezinzima, ezibalekayo. Iingqolowa zomthi we-hickory zihlala ngokuthe tye, kodwa kwezinye iimeko, zinokuba zi-wavy kwaye zingaqhelekanga. IHickory ikwanoburhabaxa bemvelo oburhabaxa obubandakanya iziphako zendalo ezingafunekiyo kumphezulu wazo ezinje ngamaqhina, iibrls, iipinholes, iintshulube, iipiki, imigca yezimbiwa kunye nemibala. Kubukeka bobuhle kunye nokubonakala kwe-weather kwenza umdlalo ofanelekileyo kwisitayile sekhabhathi yekhitshi.
IHickory isetyenziselwa ukupheka, ukosa inyama, ukutshaya okanye ukunyanga inyama. Kodwa ngokwakhiwa kwekhabhathi yekhitshi, i-hickory yenye yezona zinto zinokuthenjwa ezingqinwe ukuba zihlala iminyaka. Ngokwexesha elide, iinkuni zehickory ziyaziwa ngokuba namandla kakhulu okuthelekiswa ne-oki. Inzima kakhulu kwaye inzima kwaye ibonakalisiwe ukuba iyamelana nokuwohloka kunye nokukrazuka kokusetyenziswa kwemihla ngemihla. Nangona kunjalo, enye yeengxaki zayo eziphambili kukuba inomdla wokuqhafaza xa uboniswe kulwelo. Ke enye indlela elungileyo yokugcina ubuhle bayo bendalo kukukhusela kubumanzi ngokutywina nangokusula amaxesha ngamaxesha.
Xa kuziwa kwixabiso, iikhabhathi zasekhitshini zerustic zibiza kakhulu kunezinye iinkuni eziqhelekileyo. Kodwa bazingqina betyala ngobulumko ngenxa yobuhle babo obukrwada obenza ukuba babe ngumhombiso ogqibeleleyo.
Nangona inokudyobheka ngomnye umbala, i-hickory inyangwa ngcono ngombala ocacileyo okanye ivanishi yendalo ukuze ibalaselise iithoni zayo ezimhlophe.
I-Alder luhlobo lomthi oluhlobo lweentsapho zeBirch. Nangona i-alder wood iluhlobo lomthi onzima, ithathwa njengeyona ithambileyo kuwo wonke umthi onzima. Kunzima kunepayini, kodwa isenotyekelo lokutshixwa kwaye ubethwe ngokulula. Olu hlobo lweenkuni lusetyenziselwa ulwakhiwo lwefanitshala, ikhabhathi kunye nezinye izinto ezenziwe ngomthi.
I-Alder ibonakaliswe ngombala omdaka obomvu onombala ophantsi obomvu. Inepateni ecekeceke yokucacisa ethe tye kwaye ngokuthe gabalala ngokuthelekiswa ne-oki. Ukubonakala kububulumko, i-alder ifana kakhulu ne-birch kwaye ine-texture kuyo yonke indawo.
Iikhabhathi zasekhitshini zeRustic alder zinokubonakala okupheleleyo okubonakaliswa ngumzekelo ofanayo wokulinganisa. Umphezulu wayo uqulethe iintlobo ezahlukeneyo zamaqhina avulekileyo kwaye avaliweyo ngobukhulu obahlukeneyo kunye neemilo. I-Alder ineziphene ezimbalwa ezinje ngamaqhina, ukwahlukana, ukuqhekeka, imingxunya yeentshulube, umkhondo weentshulube, iintaka zeentaka kunye nemigca yezimbiwa, yiyo loo nto ngamanye amaxesha ichazwa njengabasebenzi beplanga ukuba icace. Ukubonakala okugudileyo kunye nokufanayo kwenza ukhetho olufanelekileyo kwikhabhathi yekhitshi.
Kwiikhabhathi zasekhitshini ze-rustic alder, jonga iinkuni ze-alder ezinokuphawulwa kwemingxunya ngamanye amaxesha ukuze ufumane eso sibheno. Le mingxunya zii-intshi ezi-intshi ubukhulu kwaye zenziwe ngamaqhina avulekileyo agqitha kwiphaneli yomnyango wekhitshi. Le mingxunya mikhulu inokushiywa ingazaliswanga kumlinganiswa we-rustic.
Ekwakhiweni kwekhabhinethi, i-Alder isetyenziswa njengesixhobo sobuso bekhabhathi yamaplanga e-birch. Ngenxa yamandla kunye nokuthembeka njengezinto zokwakha, i-alder isebenza kakuhle njengokufama kwikhabhathi yekhitshi. Iyakwazi ukugcina imilo ngaphandle kokugoba okanye ukujija. Olunye uphawu olubalulekileyo lomthi we-alder bubunzima bayo bokukhanya. I-Alder yenye yezona mithi zilukhuni, ezenza ukuphatha izinto ngokulula ngokwakhiwa
Ikwasetyenziswa njengenye indlela yokhuni oluqinileyo lwe-birch, kodwa ixabiso lentengo ngexabiso eliphantsi, libenza ukuba babe zezinye zezinto ezinokufikeleleka kakhulu kwikhabhathi yekhitshi kwimarike. Nangona kunjalo, kuqhelekile kwaye kuthathelwa ingqalelo njengomgangatho kumzi-mveliso apho i-birch plywood kunye ne-alder maplanga zidityanisiwe kunye.
I-Alder iphinda isetyenziswe ngokuqhelekileyo njengokubumba kwikhabhinethi yekhitshi ngenxa yendlela yayo echanekileyo echanekileyo. Ithambile ngokwaneleyo ukuba ingasikwa nangayiphi na indlela okanye imilo, kodwa inako ukuyigcina ngaphandle kokugoba. Ukwengeza,
Ngokumalunga nokugqiba, i-Alder ekhitshini yekhabhathi inokunyangwa ngombala wokhuni ukwenza ipateni yayo ethe nkqo ibonakale ngakumbi, okanye i-lacquer ukuyinika ngakumbi uphawu. Ngenxa yokuthamba kwayo, i-Alder ithatha indawo yokugqiba kakuhle. Izikrelemnqa zayo ezivulekileyo zinokufunxa ngokulula i-lacquer, ibala okanye ipeyinti enesixa esincinci kuphela semathiriyeli efunekayo ukuyinika isimilo esitsha. I-Alder inomgangatho ozinzileyo wokudyobha kwaye xa kufikwa kwisicelo sebala leenkuni kwiikhabhathi zasekhitshini ze-rustic alder, qiniseka ukuba uyisebenzisa ngokukhawuleza kuba ingena ngokulula kumphezulu. Ixesha elide ibala lihleli kwi-Alder cabinetry surface, iba mnyama umbala wayo. I-LAcquer inokusetyenziswa ngokulula kwiikhabhathi zasekhitshini ze-Alder xa kuthelekiswa nezinye iintlobo zeenkuni. I-Lacquer ingena ngokukhawuleza kwi-pores evulekileyo ye-Alder, ukuyinika ixesha elikhawulezayo lokumisa kunye nokunika ikhabinethi ingubo yeglasi kunye nomphezulu oqaqambileyo.
Ngokubanzi, iikhabhathi zekhitshi ze-Alder zasekhitshini zixabisiwe ngenxa yokufikeleleka, ukulungelelanisa, ukusebenziseka kulwakhiwo kwanokubonakala.
Umsedare uthathwa njengenye yezona zinto zinokuthenjwa kwizicelo zangaphakathi nangaphandle. Luhlobo lomthi othambileyo onokufumaneka kwihlabathi liphela kodwa ukhule kakhulu kwingingqi zaseMntla Melika. Imisedare ikhula kwiindawo ezinemozulu emanzi, ezibeka kwimeko ephezulu yokufumana izinto ezonakalisayo ezinje ngomngundo, ukungunda, izinambuzane kunye nokufuma. Ngenxa yale meko, imithi yemisedare iphuhlise iimpawu zokuzikhusela ukuze ikwazi ukumelana kakuhle nokusingqongileyo. Umsedare kuphela komthi oneoyile yendalo enokugxotha izinambuzane kwaye ibole ngokulula. Iyomisa ngokulula ukuyenza ukuba ingaboli lula. Ezi zakhiwo zenza iCedar enye yeentlobo ezimbalwa zeenkuni ezingadingi ukuphathwa ngaphambi kokusetyenziswa.
Ngokwembonakalo yayo, ikhupha ubuhle bendalo ngombala wayo odlamkileyo kunye neepateni zokutya okuziinkozo. Umsedare unemibala eqala kumhlophe, tyheli ukuya kubomvu kodwa ajike abe ngumbala okhanyayo ongwevu xa sele umdala. Inkangeleko ejijekileyo yeekhabhathi zekhitshi laseCedar ayilingani, nto leyo eyinika umlinganiso ocacileyo kunye nesibheno esirhabaxa esifanelekileyo kwiseti yekhitshi. Umsedare uphinde ugqibe kakuhle, ke unokunyangwa ngebala elicacileyo ukuze ipateni yawo yendalo ibonakale ngakumbi okanye inokunyangwa ngombala omnyama ngenkangeleko entsha eyahlukileyo.
Iikhabhathi zekhitshi zomsedare zaseRustic zifumaneka kumakhaya kunye nakwiikhabhathi. Amaqhina amnyama angacwangciswanga abekwe ngokuchasene ngqo nepateni yokugaya ayinike uphawu olomeleleyo olufanelekileyo ngokugqibeleleyo kubuhle obungachazwanga bendlela yoyilo lwekhitshi ye-rustic. Iikhabhathi zekhitshi zomsedare zaseRustic zihlala zibhangqwe ngezinto zelitye zendalo ukuphucula ukubukeka kwazo kwaye zibanike imvakalelo yokuphilayo.
Iikhabhathi zekhitshi zomsedare zaseRustic zixabisekile ngenxa yokuqina kwayo kunye nokomelela. Zomelele ngokwendalo xa zimanzi, zizinzile, azandisi okanye zisonteke kwaye ziyamelana nokwahlukana kunye nokuqhekeka. Ngokungafaniyo neminye imithi, i-Cedar ayithambekele ekwahlukaneni naxa ivezwe kukufuma kunye neqondo lobushushu. Olunye udidi oluphawulekayo lweekhabhathi zekhitshi zemisedare yaseRustic kukuba indala kakhulu xa ithelekiswa nezinye iintlobo zeenkuni. Babonisa iithoni ezahlukeneyo kwaye bajike baba ngwevu njengoko bekhula, benika umlinganiswa owahlukileyo ngokuhamba kwexesha.
Nangona zihlala zisetyenziselwa ukubiya, iibhokisi zefestile, ii-sidings zendlu kunye neminye imisebenzi eyenziwe ngomthi ngaphandle, umsedare lukhetho olufanelekileyo kwikhabhathi yekhitshi. Umsedare unexinano ephantsi eyenza ukuba ibe yinto enokulawulwa kakhulu ukuba isebenze nayo - kulula ukuyiphatha kunye nokuhamba ngayo. Ithe tye kwaye inokugcina ubume bayo kunye nokubonakala kwayo kuyo yonke indawo. Umsedare kulula ukusebenza ngawo nezixhobo zomatshini zombini okanye ngesandla, nangona kunjalo inokukrola ngokulula. Iindidi ezithile zezikhonkwane, izikrufu kunye nezinto zokubopha ezisisiseko zentsimbi zisenokubangela ukuba umbala othile ubonakale kumbala womthi.
Ezona ntlobo zixhaphakileyo ezisetyenziselwa ulwakhiwo lwekhabhathi yekhitshi yiWestern Red Cedar ethambileyo, enuka kamnandi kwaye inombala otyebileyo. I-Western Red Cedar inombala o-bomvu o-pinki o-brown kunye nemigca engacacanga ebomvu nebomvu emdaka. Inepateni yokutya okuziinkozo ethe tye kunye nophakathi ukuya kumbala omdaka. Nangona ukhuni olukumgangatho ophakamileyo lubiza kakhulu, iikhabhathi zekhitshi laseCedar ziqinisekisiwe ukuba ziya kuhlala amashumi eminyaka njengoko zine shrinkage encinci. Ezinye iindidi zibandakanya i-Atlantic White Cedar, i-Northern White Cedar kunye ne-Eastern Red Cedar ethi ichazwe njengokukhanya, iindidi zemithi yomsedare emhlophe.
Ndikuthanda kakubi ngayo
Ngokubanzi, iikhabhathi zekhitshi zaseCedar zekrisimesi zixabisekile ngokuhlala kwayo, umbala otyebileyo kunye nobuhle obumangalisayo.
Ngurustic uyilo lwekhitshi lwegumbi lokuloba yaziwa ngokuba nekhabhathi zasekhitshini ezinamaqhina. Kwaye kubanini bamakhaya abathanda izinto ezilula, zendalo, ezintle ezingamaplanga, ipayini yeyona nto ilungileyo yekhitshi enokuthi iphonononge. Iikhabhathi zekhitshi elinepine zihlala zisetyenziselwa useto olunobuntu bendabuko kunye nelizwe eliqaqambileyo.
Iphayini luhlobo lomthi othambileyo okhula kwiNtlabathi yoMhlaba. Iyafumaneka ngokubanzi kwaye inonikezelo oluninzi olwenza ukuba ibe zezinye zezinto zokwakha ezifikelelekayo kwimarike kwaye yenye yezona mithi zisetyenziswayo zisetyenziswa kakhulu ngaphakathi nangaphandle. I-Pine isetyenziselwa ukuvelisa amaplanga omgangatho, ukubumba, i-sidings kunye nekhabhathi yekhitshi. Luhlobo kuphela lwenkuni ezithambileyo ezimangalele ikhabhathi yasekhitshini.
Ngokwembonakalo, iPine inombala otyheli omthubi ofana ne-amber efana nayo kwaye inee-streaks ezimdaka ngamanye amaxesha. Ikwanayo nembonakalo yamaqhina, eyenza ukuba ibe lolunye lwezona zigqibo ziphambili kwiikhabhathi zekhitshi. I-Knotty pine, ngokukodwa, inembonakalo eyahlukileyo neyahlukileyo eyahlulahlula kwezinye izinto zekhabinethi. I-Knotty pine inendawo eshinyeneyo, erhabaxa egcwele amaqhina amnyama ngokungacwangciswanga, ii-swirls, iziphene kunye nokwahluka kwemibala. Banembonakalo eyomeleleyo erhabaxa ngenxa yokungafezeki kwendalo kumphezulu wayo njenge ngamaqhina, iinyanda, iitsheki, umkhondo wooqongqothwane, oonontaka kunye nemingxunya yeentshulube. Phakathi kweentlobo zeenkuni, i-knotty pine inelona nani likhulu lomlinganiswa
Zimbini iintlobo ezisetyenziswa kakhulu zompayini ezisetyenziselwa iikhabhathi zasekhitshini, ezizezi, ipine emthubi kunye nepine emhlophe. Iindidi eziqhelekileyo zepine emhlophe ezisetyenziselwa iikhabhathi zasekhitshini ziipine ezimhlophe zaseMpuma kunye nephayini emhlophe yaseNtshona. I-pine emhlophe eseMpuma ithambile kunepin emzantsi otyheli. Uninzi lweekhabinethi zekhitshi zisebenzisa iplywood kulwakhiwo lwekhabhathi yekhitshi, nangona kunjalo iplywood plywood kunzima ukuyifumana, iyenza ibize kakhulu. Ngaphandle kokusetyenziselwa iingcango zekhabinethi kunye nobuso, iinkuni zepine zinokusetyenziselwa izinto ezenziwe ngomthi kunye nokubumba okuneprofayili ukukhulisa uyilo lwekhabhathi yekhitshi.
Ngokungafaniyo nemithi elukhuni, ipayini ngokulula isenza kube nzima kodwa ihlala inyanzeliswa ukuze kuqiniswe amandla kunye nomgangatho wayo. Umthi wepine, ngokubanzi, uhlala ixesha elide kwaye uzinzile. Ukongeza kwezi zibonelelo, i-pine nayo inokulungiswa ngokulula.
I-Rustic pine ekhitshini yekhabhathi nayo ithatha iphele kakuhle. Inokunyangwa ngeoyile, ibala okanye ukugqitywa okucacileyo kokukhulisa ukubonakala kwayo kwamaqhina kuyinika uphawu lwerustic. I-Rustic pine khitshini yekhabinethi ye-aso ijongeka ilungile xa inyangwa ngombala okhanyayo okanye ophakathi. Ngenye indlela, inokudityaniswa nepeyinti, ukuyinika umbala ohluke ngokupheleleyo. Ngaphambi kokupeyinta, iikhabhathi zekhitshi lekhitshi kufuneka zitywinwe ngokufanelekileyo kuqala kwaye zilungiswe ngononophelo.
Iikhabhathi zekhitshi ezingagqitywanga nazo ziyathandwa kwisitayile sasekhitshini. Indawo ephantsi etyheli e-rustic pine khabinethi inika iikhitshi imfudumalo, ngelixa ukubonakala kwayo kwendalo kunye nokungahlanjululwanga kubonakala ngaphandle kwindawo.
Zininzi iindlela zokunika iikhabhathi zekhitshi ezikhoyo imbonakalo entsha ebonisa iinkcukacha zerustic. Enye yeendleko zendlela yokuguqula iikhabhathi esele zikho kwiikhabhathi zekhitshi zerustic kukuzihlaziya. Ukuphinda umise kwakhona yinkqubo eyenziweyo kwikhabhathi yekhitshi ebandakanya ukutshintsha ukubonakala kobuso bekhabhathi. Inika inguqu epheleleyo ngaphandle kokutshintsha ikhabhinethi yonke ekhitshini uqobo
Ukubeka kwakhona iikhabhathi zasekhitshini kunokubandakanya ukubuyisela iingcango zekhabinethi okanye ubuso beedrowa ngezinto ezintsha. Ukuhonjiswa kwesithsaba sokuhombisa kunye neenkcukacha zinokongezwa ukuze kuphuculwe inkangeleko, ukuba nje iikhabhathi ngokwazo azitshintshwanga. Ukutshintsha izinto zokugqibezela ezinje ngokupeyinta okanye ukubeka amabala yenye indlela esebenzayo yokwakha kwakhona. Ngaphandle kokutshintsha ukugqitywa kweekhabhathi zasekhitshini, enye indlela yokuphinda uvuse iikhabhathi zekhitshi kukubuyisela izixhobo zekhabinethi esele zikhona kunye nezinto ezinje ngokutsalwa kwekhabinethi, izibambo kunye neembambo.
Ukuphinda ubeke kwakhona iikhabhathi zasekhitshini ezikhoyo kunezibonelelo ezininzi. Okokuqala, kukugcinela isixa semali esilungileyo njengoko kubiza isiqingatha sexabiso lokutshintsha ikhabhathi iphela. Itshintsha kwangoko ukubonakala kwekhitshi lakho ngaphandle kwesidingo sokukrazula iikhabhathi, ngumsebenzi onzima kwaye onzima. Ukongeza koku kuthatha ixesha elincinci kwaye kunciphisa inkcitho nayo.
Nazi ezinye zeZisombululo zakho onokuzifaka ekuvuseleleni iikhabhathi zasekhitshini ezikhoyo kwaye ubanike uphawu olungaphezulu:
Yakha iingcango zekhabhinethi ekhitshini. Ungazitshintsha iingcango zekhabhinethi esele zikhona ngeengcango zekhabhinethi zasekhitshini usebenzisa isarha erhabaxa, iibhodi zepayini zeshellap. Iibhilidi zebhodi zepine ezomileyo zezona zinto zilungileyo kwiikhabhathi zekhitshi ze-DIY kuba ziyafikeleleka kwaye ziyafumaneka kwimarike. Ikwayinto ethandwayo yokukhetha iikhabhathi zasekhitshini zerustic kuba ibonisa amaqhina abonakalayo kwaye unobuntu obomeleleyo.
Amaplanga amabi anokusetyenziselwa iikhabhathi zekhitshi ze-DIY. Amaplanga amabi asarhangayo ngamaplanga ashiyekileyo erhabaxa kwaye engagqitywanga. Ihlala ifuna ukomiswa, ukucwangciswa kunye nokugqitywa ngexesha lokwakha. Ukomisa amaplanga asarhabaxa ngaphambi kokusetyenziswa kwenziwa ngokushiya izinto ngaphandle okanye ukusebenzisa eziko. Nangona kunjalo, abathengisi abaninzi banikezela ngamaplanga anamafutha emva kokuba sele yomile. Ngenye indlela, unokuthenga uxinzelelo oluphathwe ngepayini okanye ngomthi wepine ophantsi kobushushu kunye noxinzelelo ngaphambi kokusetyenziswa. Amaplanga amabi asarha athengiswa kububanzi obungahleliwe kunye nobude obunobungakanani obususela kwi-intshi ukuya kwi-intshi e-1 ubukhulu (imilinganiselo ikukunyuka kwee-intshi).
Enye into enokuthi yenziwe ngamaplanga aqingqiweyo yi-plywood plywood. Iplywood ngamapayipi angathengwa kubathengisi beenkuni basekuhlaleni ngexabiso elifikelelekayo.
Ukugaya iinkuni zakho kunye nokwakha iingcango zekhabhinethi yekhitshi kunokuba ngumsebenzi onzima. Ukuba awunazo izixhobo ezifanelekileyo zamandla kwi-DIY zakho iingcango zekhabhinethi zekhitshi, ungathenga iminyango yekhabinethi esele ilungile kwiivenkile zokuphucula ikhaya. Qiniseka nje ukuba ukhetha umthi onepateni ebonakalayo yokuqaqamba okanye imbonakalo yamaqhina ukuze uhlale unyanisekile kubuhle obuqinileyo besitayile sasekhitshini.
Kwiminyango yekhabinethi yekhitshi, isakhelo kunye nokwakhiwa kwephaneli kuqhele ukusetyenziswa. Iphaneli yomnyango ingena kwimingxunya yesakhelo somnyango. Esi sikhokelo se-DIY ekwakheni iingcango zekhabhinethi zasekhitshini, indlela elula yokwakha iya kusetyenziswa ukwenza ipaneli esisiseko esisecaleni okanye ucango lwesitayile seShaker.
Kukwabalulekile ukuba uqaphele ukuba esi sikhokelo se-DIY sifanelwe kuphela amakhitshi aneekhabhathi esele zenziwe ngomthi, njengoko ziya kujongeka kancinci ukuba iingcango zakho zekhabhinethi entsha zinento eyahlukileyo ngokupheleleyo kwizidumbu zekhabinethi ezindala. Ngokumalunga nokugqiba, ukuba iikhabhathi zakho zekhitshi esele zimhlophe ngombala, kuya kufuneka uphathe iingcango zakho zekhabhinethi yekhitshi entsha enepeyinti emhlophe efanayo. Ngelixa kugqityiwe kwindawo yokhuni, ungafaka ibala elimnyama kwiingcango ezintsha ze-DIY kwaye uphathe isidumbu esele sinombala ofanayo.
Ngenye indlela, unganxiba ngokupheleleyo ungqimba lwepeyinti ehambelana nayo. Nangona kunjalo, isitayile sekhabhathi yekhitshi ye-rustic sisebenza ngokugqibeleleyo ngamabala emithi, ke khetha ukuhamba nebala. Qaphela ukuba ngokubhekisele ekusetyenzisweni kwakhona kwamabala emithi kwiikhabhathi zekhitshi esele zikhona, kulula ukuba mnyama kunokuba uhambe ukhaphukhaphu.
Izinto ezisetyenzisiweyo ekwakheni iingcango zekhabhinethi zekhitshi ye-DIY:
Amaplanga amabi asarhabaxa (ubungakanani buya kuxhomekeka kubungakanani beengcango zekhabhinethi yakho) okanye
I-intshi yeekhabhi zebanga lepine plywood (emnyango wekhabhinethi)
1 x 2 intshi x 8 ipineyini (ukulungiselela itrims)
1 intshi izikhonkwane brad
IKhabhinethi iyadonsa kwaye iphathe
Ibala lomthi (ibala elicacileyo) okanye ioyile esekwe kwi-polyuretahne okanye ibala elisekwe kwioyile
Idlavu okanye ilaphu (lokufaka ibala leenkuni)
Izixhobo ezifunekayo ekwakheni iingcango zekhabhinethi zekhitshi ze-DIY:
Ipensile okanye itshokhwe
Isando okanye umpu
I-Miter Saw (ezi zixhobo zamandla zihlala zifumaneka kwirente ukuba awunalo uhlahlo-lwabiwo mali lokuthenga enye)
Nanga amanyathelo afunekayo ekwakheni iingcango zekhabhinethi yakho zerustic:
Lungiselela umsebenzi. Khupha izixhobo zakho ngaphambi kokuba uqalise ngeekhabhathi zekhitshi ze-DIY. Thelekisa amaxabiso kubanikezeli abohlukeneyo njengoko izibonelelo zabo zingahluka ngokuxhomekeke kwindawo abakuyo. Khangela iinkuni zepine ezinamaqhina amaninzi njengoko ziya kubonisa ngakumbi ukuba ziphathwe ngebala, zinika ikhitshi lakho uphawu olutsha lwe-rustic
Susa iingcango zekhabhinethi ezikhoyo. Qala ngokususa iingcango zekhabhinethi esele ikhona, kubandakanya neehenjisi. Beka bucala njengoko unokuzisebenzisa njengesikhokelo ekwakheni iingcango zekhabhinethi entsha. Yenza ulungiselelo oluyimfuneko ngaphambi kokuqala ngeprojekthi yakho, njengokugubungela izidumbu zekhabinethi yakho nekhitshi nephephandaba.
Ngononophelo ulinganise iikhabhathi zakho zasekhitshini ezikhoyo. Iingcango zakho ezikhoyo zekhabinethi yesikhokelo sisikhokelo esifanelekileyo ekufumaneni ubungakanani obufanelekileyo kwiingcango zakho zekhabhinethi entsha. Linganisa ukuvulwa kwekhabhinethi yakho yasekhitshini kwaye uvumele isithuba se-intshi ye-intshi kuwo onke amacala phakathi komnyango kunye nokuvulwa kwekhabinethi. Qaphela imilinganiselo kwaye unqume inani leengcezu oza kuzifuna ukuze uqinisekise ukuba ubuninzi bezinto zakho zanele.
Sika iinkuni. Qalisa ukucwangcisa imilinganiselo kwiphepha lakho leplanga elirhabaxa okanye kwiphepha leplywood. Phawula imilinganiselo ngepensile okanye ngetshokhwe kwaye uqiniseke ukuba uyijonga kwakhona ngokuchaneka. Ngokusekwe kwimilinganiselo ecwangcisiweyo, qala ukusika iinkuni ngesarha ejikelezayo. Cwangcisa kwangaphambili ukuze ufumane elona xabiso liphezulu leplanga / iphepha. Emva kokuba umthi unqunyulwe, qiniseka ukuba ulula kwaye unxweme imiphetho usebenzisa i-sandpaper.
Sika iinkuni ngokuxhomekeke kwinani leminyango oyifunayo. Emva kokusika ngoku ufumana iipaneli zeminyango ethe tyaba kunye nemiphezulu. Iimpawu ziya kongezwa kamva. Unokuthenga izinto ezilungisiweyo ezenziwe ngokuhombisa okanye wenze ezakho ngokusekwe kuyilo lwakho olufunayo.
Yenza i-trim yakho. Emva kokuthatha isigqibo kwiprofayili kunye noyilo lwe-trim oyifunayo, ngoku lixesha lokwenza i-trim. Kule projekthi, siza kwenza uyilo olucekeceke lwepaneli oko kuthetha ukuba izipaji zicace ngqo iziqwenga zomthi ezibekwe zijikeleze iphaneli yeziko lomnyango wekhitshi.
Qinisekisa ubungakanani be-trim oya kuyidinga kwaye uphawule le milinganiso kwisiqwenga se-1 x 2 intshi x8 ipine. Uzakufuna iziqwenga ezi-4 zepaneli yomnyango nganye. Isinxibo saphezulu nesezantsi kufuneka silingane ngokulinganayo, ngelixa ii-trim zasekhohlo nasekunene kufuneka zibe nobude obulinganayo. Qiniseka ukuba iziphelo zeetrims zakho ziyancitshiswa ukuze zidibane ngaphandle komthungo emva kokuba ziqhotyoshelwe kwiphaneli yomnyango wekhabhinethi. Le nkqubo ifana ngendlela efanayo nokwenza isakhelo somfanekiso esilula ngamalungu adibeneyo.
Qhoboshela izipaji kwiipaneli zeminyango yekhabhinethi. Ukuze i-trims ingene kwipaneli yomnyango wekhabhinethi, kuya kufuneka ubeke inotshi kwiitrims. Yenza i-intshi ye-intshi nge-intshi enye inotshi enzulu ejikeleze iinkuni ukuze ilingane emnyango. Sebenzisa itafile yesarha ukusika i-intshi enye ubunzulu ngo-intshi ye-intshi ebanzi. O ezi ziqwenga ezi-2 zeebhodi ezibekwe nkqo. Emva koko beka iibhodi ezi-2 ezifanayo kwaye usete itafile ukusika i-intshi enzulu ngo-intshi inotshi ububanzi. Nje ukuba ugqibile, qalisa ukunxitywa kweepaneli zomthi ezisikiweyo emnyango, usebenzisa iglu yesikhonkwane kunye nokugqibezela iinzipho. Vumela iglue ukuba yome.
Isanti emaphethelweni. Nje ukuba ucango lwakho lwekhabhathi lugqityiwe, yisanti imiphetho kwaye uqiniseke ukuba igudile.
Phinda ujonge ubungakanani bomnyango wekhabhathi ogqityiweyo. Yoma umnyango wakho wekhabhathi ogqityiweyo kwisidumbu sakho sekhitshi ekhitshini ukuze ubone ukuba sihambelana ngokuchanekileyo.
Faka isicelo sokugqiba. Ukunika iingcango zakho zekhabinethi ekhitshini ukubukeka kwe-rustic, vumela ipateni yokugaya yendalo kunye namaqhina omthi wompayini ukuba ume ngokuwuphatha ngengubo yebala elicacileyo. Coca iikhabhathi kancinci nge-sandpaper kwaye ulandele ulwalathiso lwenkozo yeenkuni. Emva kwesanti faka into yokulungisa iinkuni. Emva koko usebenzisa isiqwenga selinen okanye ilaphu, sebenza ibala lomthi liye ezantsi emingxunyeni yomthi. Qinisekisa ukuba ufake isicelo ngokulinganayo kwaye usebenze kwicala elilandela ukuhamba kwendlela yokutya okuziinkozo. Sebenza ngokukhawuleza, kodwa ngononophelo olukhulu ukuqinisekisa ulwabiwo olulinganayo. Vumela ibala leenkuni ukuba lome.
Faka izixhobo zekhabhathi yekhitshi. Chonga indawo echanekileyo ikhitshi lakho lekhitshi kunye nokuphatha ebusweni bomnyango wekhabhinethi yakho entsha. Ungasebenzisa itape yokulinganisa ukucwangcisa oku ngokuchanekileyo kwaye uyimakishe ngepensile ukuze wazi apho ungazivalela khona izikrufu. Zama oku ngesiqwenga somnyango wekhabhathi yekhitshi emva koko usebenze indlela yakho uye kwamanye amaqhekeza aseleyo, uqinisekisa ukuba izibambo ziyafana kwiindawo zazo. Qhoboshela izibambo zekhabhinethi ekhitshini kwindawo ephawuliweyo, usebenzisa i-screwdriver okanye isixhobo sombane kunye nezikrufu. Inani lezikrufu liya kwahluka ngokuxhomekeka kuhlobo lwekhabhathi yekhitshi oza kuyisebenzisa- izibambo kunye notsalo, umzekelo, zifuna iziqwenga ezibini, ngelixa amaqhina ahlala esebenzisa isiqwenga esinye, esenza ukuba kube lula kakhulu . Qaphela ukuba indawo echanekileyo yokuphatha ikhabhinethi yakho iya kuxhomekeka kakhulu kukhetho lwakho kunye nokhetho lwakho.
Emva koko qhubekeka nokudibanisa iihenjisi. Cwangcisa indawo yeehenjisi zakho ngokusekwe kwikhabinethi yekhitshi esele ikho emva koko usebenzisa i-drill yombane, imingxunya yokumba kunye nokubopha iihenjisi endaweni. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zeehenjisi kwaye nganye inokufuna uhlobo oluthile lofakelo. Uhlobo oluqhelekileyo lufihliweyo, kodwa oku kufuna ukuba kuhlanjululwe ngasemva komnyango wekhabhinethi yekhitshi.
Nayi ividiyo ebonisa indlela yokwakha iikhabhathi ezilula zomthi eziqinileyo:
Ngokubanzi, imibala yeekhabhathi zekhitshi ye-rustic ifudumele. Oku kubandakanya i-shades etyebileyo emdaka, ehlala ibonakaliswa ngokusetyenziswa kweenkuni kwindalo okanye ekugqibeni amabala. I-antique emhlophe, ukhilimu, beige kunye nomhlophe omhlophe ikwayimibala ethandwayo yeekhabhathi zekhitshi.
Le khabhathi yekhitshi imibala ihlala ihambelana nombala womhlaba njengobomvu, luhlaza kunye notyheli. Akukho zimpawu zinesibindi okanye eziqaqambileyo, kodwa endaweni yoko umbala wephalethi awuthathi cala njengoko kufuna ukukhuthazwa kwindalo
Ukubamba inkangeleko yendlela yokwenyani yasemaphandleni ethi iitayile zerustic zekhitshi, iikhabhathi zekhitshi zerustic zibhangqwe kakuhle kunye nokuzalisa ii-decors ukunika ubomi obungakumbi kwisithuba
Imiqadi yeplanga egciniweyo, imisebenzi yamatye, iiplanga ezibanzi, iipleyiti ezenziwe ngobhedu, isinki enkulu yefenitshala kunye nefenitshala yezinto zakudala nazo ziimpawu zorhwebo zekhitshi. Izinyithi ezinje ngentsimbi, kunye nobhedu, zinokusetyenziselwa ukuhombisa kunye nokugxininisa ukubonelela ngokwahluka kunye nokwahluka.
Kwaye ekubeni isitayile sekhitshi saziwa ngokudala iipateni ngokudweliswa kwezinto, iikhabhathi zomthi ezidityanisiweyo ezinokwahluka kwesinyithi se-antique, okanye ukudibanisa ilitye lendalo ukukhulisa iindonga kunye nokwaphula ubumbano lomthi kwisithuba.
Iikhabhathi zekhitshi zaseRustic zikwindawo entle ebhangqwe ngetafile yokuhombisa ilitye lendalo enje ngegranite njengoko zinendawo ejijekileyo yesatin - enye engazukukhuphisana nentambo ijongeka kwikhabhathi yamaplanga. Ngaphandle koko, ibhloko ye-butcher kunye ne-countertops yeplanga ingasetyenziselwa ukuba ijolise kwi-rustic vibe eyongezelelweyo.
Ukuba unendawo entle yokuhlala, izitetimenti zefanitshala ze-antique ezinje ngetafile yeerustic kunye nezitulo zinokufakwa kuyilo lwekhitshi ukubonelela ngendawo yokutyela neyokuzonwabisa. Ukufumana imifanekiso ehambelana nayo ndwendwela eyethu iikhabhathi zelizwe zasekhitshini igalari ebekwe apha.
izimvo zegumbi lokuhlala ezintle
iintetho zomtshato umama womyeni